के तपाईको हातमा यो मासुकाके लाईन छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > के तपाईको हातमा यो मासुकाके लाईन छ ? यो रेखालाई के भन्छन जापानिजहरु ?
हजुरहरुलाई हात हेर्ने सम्बन्धमा कति कुरा थाह छ ? के हजुर हात बाट मानिसको भबिस्य हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु हुन्छ। हात हेरेर मानिसको फर्च्युन बताउने संस्कृति कहाँ र कहिले सुरु भयो भन्न निकै कठिन छ। मानिसहरु यो कला पुरानो ईजिप्टबाट सुरु भएको हो भन्दछन। यदि हजुरको हातमा निरलाई पाईने केहि रेखाहरु छन् भने हजुरलाई अरु भन्दा भाग्यमानी मानिन्थ्यो। भाग्यमानि मात्र नभएर त्यो रेखा ले हजुरलाई धनि र सफल बनाउने भन्ने कुरा बिस्वास गरिन्थ्यो। के हजुरको हातमा यो मासुकाके रेखा छ ?
धेरै जसो मानिसको हत्केलाको तल्लो भागमा दुई फरक फरक रेखा हुन्छन। एउटा रेखालाई हर्ट लाईन र अर्कोलाई हेड लाईन भनिन्छ। तर संसारका १० % मानिसको यी दुवै रेखा मिलेर एउटा सिंगल लाईन बनेको हुन्छ। यो दुई रेखा फ्युज भई बनेको एउटा रेखालाई जापानीमा मासुकाके रेखा भनिन्छ. यो रेखा भएका ५०% मानिसहरुमा डाउन सिन्ड्रोम देखिने अध्ययनले देखाएको छ। रेखाहुने मानिसहरुमा डाउन सिन्ड्रोम देखिने भएता पनि जापानीहरु मासुकाके लाईनहुने व्यक्तिलाई भाग्यामानी मान्दछन। अंग्रेजीमा यसलाई सिमियन लाईन भनिन्छ। सिमियन भनेको बादर संग मिल्ने भनिएको हो। हात हेर्नेहरुले चाहि यसलाई सिंगल पाल्मर क्रिज भन्दछन।
जापानमा यो रेखाले के अर्थ राख्दछ ?
मासुकाके लाईन हत्केला भएका मानिसलाई बिजेता मानिन्छ। यी रेखा भएका व्यक्तिले अरु व्यक्ति भन्दा उच्च नेतृत्व क्षमता देखाउने र प्रतिभाशाली हुने बताईन्छ। उनीहरु जन्मदै निकै भाग्यमानि हुने र आफ्नो प्रतिभा र क्षमताले जिबनमा धेरै सफलता हात पार्ने बताईन्छ। मासुकाके लाईन भएका धेरै मानिसले कम उमेरमै धन कमाउन सफल भएको थुप्रै उदाहरण छन्। सबै राम्रो कुराको आफ्नो मूल्य हुन्छ भने झैँ यी लाईन भएका मानिसहरु करियरमा सफल भएपनि अलि चाडो रिसाउने, अरुको नसुन्ने, आफ्नो कुरामात्र लागु गर्न खोज्ने खालका हुन्छन। त्यसैगरी यी रेखा भएका मानिसको लभ लाइफ भने सफल नहुने बताईन्छ।
मासुकाके लाईन भएका केहि पपुलर व्यक्ति
प्राचिन जापानका तोकुगावा ईएयासु र तोयोतोमी हिदेयोशी र ओदा नोबुन्गालाई टप मिलिटरी लिडर मिनिन्थ्यो। ति तिनै व्यक्तिको मासुकाके रेखा रहेको पाईन्छ। ईएयासु एदो युगका पहिलो शोगन थिए। उनीलेनै जापानलाई एकीकरण गरि राज गरेको मानिन्छ। यी लिडरहरुको हातको मासुकाके रेखाले गर्दा यसो भएको भन्ने पनि थुप्रै छन्।
नाराको ग्रेट बुद्धको पनि मासुकाके रेखा रहेको बताईन्छ। उनको हातमा यो रेखा मात्र नभई कान पनि लामो लामो थियो. कान लामो हुनु भनेको जापानीमा धनि हुने शुभ संकेत हो। मासुकाके रेखा भएका अरु व्यक्तिमा जापानी पूर्व प्रधानमंत्री किशी फुकुदा र एईसाकु पनि रहेका छन्। त्यसैगरी १७ वर्षको उमेरमै ख्याति कमाएका मान्गा चित्रकार ओसामु तेजुकाको पनि मासुकाके रेखा रहेको छ।
हजुरले जापानी आनिमे वान पिस नहेरेको भए पनि नाम त पक्कै सुन्नु भएको होला। यो आनिमेको क्यारेक्टर लुफीको पनि मासुकाके रेखा रहेको छ। लुफीलाई यो आनिमेमा एक बिजेता देखाईएको हुन्छ। त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि यो आनिमेका लेखकले यहि बिजेताको कुरा ध्यानमा राखेर लुफिलाई मासुकाके रेखा दिएका हुन्।
अरु केहि जापानी अन्धविश्वासहरु
जापान देश निकै आधुनिक भएता पनि थुप्रै अन्धविश्वासहरु रहेको पाईन्छ। यी अन्धविश्वासहरु केहि डरलाग्दा छन् भने केहि अचम्म लाग्दा छन्। यिनीहरुको उत्पति कहिले र कसरि भयो भन्ने थाहा छैन। केहि अन्धविश्वासमा १०० चोटी बडुल्कि लागे मानिसको मृत्यु हुने, खान खाने बित्तिकै सुते गाईको जुनी हुने, रति सपनामा माकुरा देखे नराम्रो हुने तर बिहान देखे राम्रो हुने जस्ता हुन्। तर यस्ता अन्धविश्वास जुनसुकै देशमा पनि हुने गर्दछ। नेपालमा पनि थुप्रै यस्ता अचम्म लाग्दा अन्धविश्वासहरु छन्। पक्कै पनि हजुरले आफ्नो आम बुवा वा हजुरआमाहरुको मुख बाट सुन्नु भएको होला।
ल अब आफ्नो हत्केला हेर्नुस त। के हजुरको हातमा मासुकाके रेखा रहेछ ? के हजुरले आफ्नो नजिकको कोहिमा यो रेखा देख्नु भएको छ ? यदि छ भने के हजुरमा र ’emमा कुशल नेतृत्व क्षमता छ ? के हजुरले सफलता चुमिसक्नु भएको छ ? अनि मासुकाके रेखा भएका मानिसहरुको प्रेम जिबन राम्रो नहुने कुराले चिन्ता नलिनुहोस. यो एक अन्धविश्वास मात्र हो। जापानमा थुप्रैले हत्केला पढ्नेमा विश्वास गर्दछन। के हजुर मानिसको हात हेरेर उसको भबिस्य बताउन सकिने कुरामा विश्वास गर्नु हुन्छ ? यदि हजुरको नजिकै कसैको मासुकाके रेखा छ भने उनीहरुको जीवन कस्तो हुनेछ हेर्नु होला।